I-Android-iiVenkile zezilwanyana | I-Androidsis
Khuphela okona kulungileyo wallpapers zezilwanyana ye-Android yakho. Ukuba uyakuthanda izilwanyana zasekhaya, apha uya kufumana iintlobo ngeentlobo zamaphephadonga aneentlobo ezahlukeneyo zezilwanyana ukuze ukwazi ukukhetha oyithandayo.
Ukukhethwa kwamaphephadonga e-Android kukhulu. Kodwa ukuba unomdla kwimvelaphi yezilwanyana, eli licandelo lakho. Kuyo uya kufumana ezona wallpapers zintle kunye nezilwanyana. Ukusuka kwezona zilwanyana zithandekayo kwezona zilwanyana zibalaseleyo. Yonke into ukutshintsha inkangeleko yefowuni yakho ngendlela elula.
Kweli candelo uya kuba nakho ukufumana ezona mali zilungileyo kweli candelo. Ke ukuba uyazithanda izilwanyana, akufuneki uphoswe kokhetho lubalaseleyo olukho kwifowuni yakho ye-Android.
Ukuba ufuna ngaphezulu iimifanekiso zeselfowuni, ungathandabuzi ukutyelela ikhonkco esisandula ukukushiya.